Bie ndụ gị ma chefuo afọ gị. - Jean Paul - Kwuru Pedia
Bie ndụ gị ma chefuo afọ gị. - Jean Paul
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibi ndụ gị ọ happụ, echela banyere afọ ndụ gị. Have ga-atụle afọ ole a abụghị naanị ọnụọgụ. Otutu n’ime anyi n’acho iche na oge agadi nwere otutu ihe ma aju obi na ndu gi.
N’ezie, anyị bi n’oghere a na-enweghị ike ịchọpụta akụkụ dị iche iche nke ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị aka nká. Ma ọ bụrụ nrara ị raara onwe gị nye, onweghị onye ga - egbochi gị ibi ndu gị dịka ịchọrọ. Otu ihe ikwesiri ijide n’aka bụ na ị gbasiri ike ma bie ndụ gị dabere n ’ụkpụrụ gị.
Ihe niile dabere na ọgụgụ isi gị na ikike iche echiche. Y’oburu n’ike na uche gi, inwere ike imezu ebumnuche gi, oburu n’onwo agadi. Afọ ndụ gị agaghị emetụta ebumnuche nke ndụ gị. Naanị ihe ga - enyere gị aka imezu ebumnuche gị bụ ọchịchọ gị.
Agamagho, anyi ghota na age nwere ihe di nkpa ime ma aruo ya aru. Ọ bụ ihe a ma ama bụ na ị ga - efukarị ike na ike nke ịnwe na ndụ gị mbụ.
Agbanyeghị, dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ọchịchọ gị siri ike ma bụrụ na ị dị njikere nke uche iji mezuo ebumnuche gị, o nweghị onye ga-egbochi gị ime nke ahụ. Ihe ị ga - eme bụ ịkwadebe onwe gị n’uche, ị ga - agba akaebe na i juputara obi na ume.
Ọ dị mma, ọ bụrụ n’inyocha ntakịrị, ị ga-ahụ na enwere ọtụtụ ọmụmaatụ ebe ndị okenye mezuru ebumnuche ha. N’ihi ya, gbaa mbọ na-agba mbọ mgbe niile, ọ ga-enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. Gi echegbula onwe gị gbasara afọ gị dị ka ọ bụ naanị ọnụọgụ.
Inweta Old Quotes
Inweta Agụụ Oge ochie
Nnukwu Quotto Bi ndu
Too Quires ochie
Ndụ dị oke mkpụmkpụ
Na-ebi na nkeji oge
Ndụ Life Quotes Short
Kwuru okwu n’iile banyere ndu
Quots About Inweta Older na Wiser
Naanị Once Na - adị Ndụ Ozugbo Quotes